ABOUT US | Ichibanoil
CALL US TODAY FOR A CONSULTATION +95-9 450006407
ADDITIVE OIL ၂ဆပေါင်းစပ်ထား
သော ဆီအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကီလို ၈,၀၀၀ နှင့် ၁၀,၀၀၀ ကြား အသုံးပြုနိုင်သည်။
Additive oil inacompound oil which can be used, for the distance between 8,000 to 10,000 Kilometres.
ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက် ( Introduction of Company )
JPC TRADE သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်နေသော နိုင်ငံတကာသို့ ဂျပန်လေလံကားများတင်ပို့သော ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
JPCTRADE မှ မြင့်မားသော ဝန်ဆာင်မှုဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ JPC ၏ Auction Search Systemသည် ဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိ ကားလေလံကွင်း ၁၅၀ ခန့်၏ ဆာဗာများမှ ကားများ၏ အချက်အလက်များကို စုစည်းပြသပေးထားပါသည်။
JPCTRADE မှ နိုင်ငံတကာရှိမိတ်ဆွေများနှင့် တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဂျပန်ကားလေလံဈေးကွက်တွင်း ပါဝင်နိုင်ရန်နှင့် အရည်အသွေးကောင်းကားများကို သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
မင်းသုတကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံ JPC Trade ကုမ္ပဏီ၏ မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရယူကာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Reconditioned Car များအား မြန်မာနိုင်ငံမှ Car Showroom များအတွက် တင်သွင်ပေးခြင်း၊ Japan Original Spare Parts များတင်သွင်းရောင်းချခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှအရည်အသွေးမြင့် Engine Oil များနှင့် Gear Oil များကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
JPC Trade was established in the year 2003. Presently it is exporting second hand cars to all aver the countries if the world. JPC Trade welcome you by providing high services. JPC's Auction search system is displaying information and data of cars throught its servers which you can view about 150 auction fields all over Japan. JPC Trade invites our patrons and direct buyers from us to participate in Japan car auction market. We are providing you our efficient service so that you may, conveniently by good, condition, cars at reasonable prices.
Min ThuTa Company is the sole representative of JPC Trade, Company of Japan, who is importing reconditioned cars from Japan to be displayed at car show rooms in Myanmar and Importing Japan Original spare parts. It is also importing high quality engine oils and gear oils, direct from Japan.
Japan Reconditioned Car Supplier
2013 ခုနှစ်မှစတင်၍ Japan နိုင်ငံပြည်တွင်းသုံးကားများကို JPC Trade ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင် Agent အဖြစ် ရယူကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Car Showroom များအတွက် ယနေ့အထိ တင်သွင်းရောင်းချပေးနေပါသည်။
Starting from 2013, JPC Trade Company taking and having legal Agent for Japan local used car and importing and selling these cars to Car Showroom of Myanmar till today.
မင်းသုတကုမ္ပဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်းပေးထားသောကားများအတွက် ရောင်းချပြီးနည်းပညာဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်လူမျိုးကျွမ်းကျင် Mechanics များ၏ အထူးသင်တန်းပေးခြင်းခံထားရသော ကျွမ်းကျင် Mechanic များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Workshop ဖြင့် ရောင်းချပြီး မော်တော်ယာဉ်များအား နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။
Cars imported by our Representative Min Thu Ta Company is giving after sale service. This technological service in provided of the workshop formed with Japanese skilled mechanics.
Maintenance and technological Service
Japan Original မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းတင်သွင်းရောင်းချခြင်း
ဂျပန်ပြည်တွင်းသုံး မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများကိုသာတင်သွင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းကောင်း ကြိုက်သောသူများအတွက် Genuine Parts များကိုသာ မှာယူတင်သွင်းရောင်းချပေးပါသည်။
Min Thu Ta Company is importing car spare parts that are locally using in Japan. For
those who desire to use genuine parts we are importing for them much spare parts.
Sale of Japan original spare parts
Japan ပြည်တွင်းသုံး စက်ဆီ၊ ချောဆီနှင့် Gear Oil များ တင်သွင်းရောင်းချခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် Genuine Engine Oil များ တင်သွင်းရောင်းချခြင်း၊ Additive Oil များ တင်သွင်း ရောင်းချခြင်း၊ ATF-T4 နှင့် CVT Gear Oil များတင်သွင်းရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ Addtive Oil အချိုးကျပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသော Japan ပြည်တွင်းထုတ် အင်ဂျင်ဝိုင်များကို ICHIBAN အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးသို့ တရားဝင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
First grade japan made genuine engine oils, Additive oils, ATF - T4 and CVT Gear oils, are imported from Japan for sale and distribution in Myanmar. At present Additive oil that is proportionately mixed with Japan produced engine oils bearing ICHIBAN brand in being imported for sale through out Myanmar.
Import of engine oil, lubricant and gear oil using in Japan.
ကုမ္ပဏီ နာမည် (Company Name)
(Date of Established)
Used car auction mediation agency
Japan Used Vehicle Exporters Association(JUMVEA)
Tokyo Chambers of Commerce
Tokyo Public Safety Commission No: 307710506115
© COPYRIGHT 2016 ICHIBANOIL ALL RIGHT RESERVED.